Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Lagu Hoobtay oo Dhexmaray Qoomiyadaha Guji & Burji.
Dagaal Lagu Hoobtay oo Dhexmaray Qoomiyadaha Guji & Burji.
Posted by Dulmane	/ January 1, 2018
Wararka naga soo gaadhaya xuduuda udhaxaysa Gobolka Shucuubta Koonfureed ee Itoobiya iyo Gobolka Oromia ayaa sheegaya dagaal lagu hoobtay oo maalintii labadaa si xidhiidh ah uga socda halkaas.
Dagaaladan oo udhaxeeya qoomiyadaha Guji iyo Burji oo wada daga xuduuda dheer ee u dhaxaysa labada Gobol ee Oromia iyo Shucuubta Koonfureed ayaa sida lasheegayo bilowday kadib markii colaad laga soo safriyay magaalada Addis Ababa lagu soo dhex tuuray isla markaana qoomiyad kasta loosheegay in ay qoomiyada kale boobayso dhulkeeda iyo xaqooda.
Goob jooge u waramay qaar kamid ah warbaahinta afka Axmaariga kuhadasha ayaa sheegay in ay maanta iyo shalay dhinteen 45 qof oo shacab ah isla markaana kasoo kala jeeda qoomiyadaha Guji iyo Burji, wuxuuna goob jooguhu sheegay in ay dhimashadu intaas kasii badan karto maadaama oo dagaalku uu kufiday aagag hor leh.
Sidoo kale goob joogaha ayaa sheegay in dhaawac aad ubadan lagu daabulay isbitaalada Oromia iyo kuwa shucuubta koonfureed, halkaas oo dhaawacyada ay kujiraan qaar aad uliita oo ay adagtahay in wadanka gudihiisa wax lagaga qabto kuwaas oo rasaastu ay haleeshay.
Dhinaca kale ciidamada labada qoomiyadood oo isu adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sameeyay barakicin aad ubaahsan, waaana lasheegayaa in ay ciidamadu gubeen deegaano baaxad leh oo ay daganaayeen shacabka qoomiyadaha uu dagaalku dhex maray.
Ciidamada gumaysiga Itoobiya ee aagaas kusugan ayaa lasheegayaa in aysan samaynin wax isku day ah oo ay kukala badbaadinayaan maleeshiyooyinka islaynaya, waxaana lasheegayaa in ay sheeda ka eegayeen iyagoo waliba ku faraxsan in uu hirgalay qorshahoodii isku dirka qabiilada dariska iyo danwadaagta ba ah.
Taliska gumaysiga Itoobiya ayaa qaatay qorshe balaadhan oo uu isku hubaynayo iskuna dirayo shucuubta kala duwan ee uu gumaysto, wuxuuna talisku qorshahan qaatay kadib markii uu u fahmay in ay faa’iido utahay taas oo isaga kadaba imaan doonta.